Shina mpanamboatra sarimihetsika stretch, sarimihetsika mitsangatsangana, horonantsary fametahana sarimihetsika, sarimihetsika fitandremana torolàlana, sarimihetsika famelatan-tànana, fonony matevina
Description:Sarimihetsika mihetsika,Sarimihetsika mitsivalana,Sarimihetsika mihetsika amin'ny milina,Sarimihetsika mihetsika amin'ny tanana,Film Film Stretch,Manenjana
 HomeProductsSarimihetsika mihetsika
Ny vokatra avy amin'ny Sarimihetsika mihetsika , mpanofana manokana avy any Shina, Sarimihetsika mihetsika , Sarimihetsika mitsivalana mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Sarimihetsika mihetsika amin'ny milina R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Sarimihetsika fonosana vita amin'ny plastika 450mm
Horonan-tsarimihetsika 50 tonon-taona mihetsika polyron polyethylene jumbo
Ilay horonan-tsarimihetsika mivalona stretch dia ampiasaina betsaka amin'ny famafazana pallet pack, manana hery mahery vaika, fanoherana puncture, fanoherana ny ranomaso. Miaraka amin'ny tanjaka tsara (500%) sy ny fihenam-bidy, ny fonon-tanety dia afaka manangona entana tsy misy naoty mandritra ny fitaterana, miantoka ny rano, ny vovoka, ny fahatapahana ary ny fiarovana tsara. Ny sarimihetsika miloko dia azo zaraina ao amin'ny Manual pe stretch film, horonan-tsarimihetsika fonosana ary sarimihetsika plastika Pre-stretch. Ny paosy pallet dia nampiasa ny LDPE sy LLDPE ho fitaovana mamatsy, izay manafatra avy any Etazonia, toa an'i Exxonmobil sy ny orinasa petrokimia hafa. Ny fonosana palita dia manana habe maro samihafa, afaka manamboatra fonosana fonosana.
Sarimihetsika mihetsika Sarimihetsika mitsivalana Sarimihetsika mihetsika amin'ny milina Sarimihetsika mihetsika amin'ny tanana Film Film Stretch Manenjana Sarimihetsika mihetsika 3 Sarimihetsika mihetsika LLDPE
taratasy fanamarinanaCompany ShowVideo